Yini igobolondo? | Kusuka kuLinux
mthokozisi | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso
Emahoreni ambalwa adlule ngibhale mayelana Igobolondo le-GNOME nekusasa lalo futhi umfundi wenza ireferensi kokuthile engicabanga ukuthi kubalulekile ukukucabanga, Liyini igobolondo?.
Kahle ngencazelo esinayo: Ekusebenziseni ikhompyutha, igama igobolondo isetshenziselwa ukubhekisa kulezo zinhlelo ezinikezela ngesibonisi somsebenzisi ukufinyelela izinsiza zohlelo lokusebenza. Lokhu kungaba yimidwebo noma umbhalo ocacile, kuya ngohlobo lwe-interface abayisebenzisayo. Amagobolondo aklanyelwe ukwenza lula indlela izinhlelo ezahlukene ezitholakala kukhompyutha ezinconywa noma ezenziwa ngayo..
Kumele kuqashelwe ukuthi kunezinhlobo ezi-2 zeShell futhi yilezi:
Amagobolondo ombhalo ojwayelekile njengoba bash, emacs, Windows command Prompt, phakathi kwabanye.
Amagobolondo eshadi avamile njengoba I-GNome, KDE, XFCE, LXDE, Unity, MacOS Desktop Environment, Windows Desktop, phakathi kwabanye.
Ngakho-ke singafingqa ukuthi ngamaShell ngamagama ambalwa imvelo yedeskithophu (i-DE) noma iMenenja yeWindows (i-WM) esiyisebenzisela ukusebenza kuma-PC ethu, noma ngabe ukusabalalisa esikusebenzisa kanjani ngezindawo ze-GUI's (graphic environments) noma nge i-terminal maqondana nokusebenzisana esikudingayo ukuze sikwazi ukusebenzisa izinsiza nezinhlelo zokusebenza ezinikezwa yizinhlelo zokusebenza.
Le ncazelo efanayo ingasetshenziswa nakumadivayisi eselula njengama-smartphone namaphilisi, kungaba nge-Android, iOS noma ngeWindows Phone; ngoba lezi zokugcina zingamasistimu asebenzayo ane-DE noma i-WM eyenziwe ngaphambilini.
Ngakho-ke, i-KDE iyiShell, i-XFCE iyiShell, i-LXDE iyiShell, i-iOS iyiShell, i-Android iyishell, i-Windows Phone iyiShell, i-terminal igobolondo (nge-bash), ngakho-ke singathini nge-GNOME 3 iphathelene nokusebenzisana kwayo nokubukeka kwayo akukho okunye. Ukuthi ushintsho belunkulu: YEBO.
I-KDE kanye / noma amalungu omphakathi azama ngemvelo ngefilosofi "efanayo" (hhayi ukusho okufanayo) naleyo esetshenziswe yiphrojekthi yeGnome namuhla, ngoba ngokwencazelo i-KDE nayo ingabizwa ngokuthi yi-KDE Shell.
Kukho konke okuchazwe ezigabeni ezedlule, ngingaqala ukusho ukuthi i-GNOME 3 (Shell) inekusasa noma ngabe abanye abantu bayayithanda noma abanye abayithandi.
QAPHELA: Incazelo nezinhlobo zeShell engizithathe kuWikipedia, isixhumanisi ngu lokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Yini igobolondo?
Yebo, uma lokho kuyincazelo yegobolondo, khona-ke amagobolondo anekusasa.
Kepha imvelo yedeskithophu yeGnome (qonda i-GNome-Shell) ayinayo ngaphandle kokuthi ikwenze kube okulungisekayo njengoba ngangishilo kokunye okuthunyelwe.
Ngifuna ukugcizelela ukuthi angiphikisani namagobolondo, kuphela i-gnome3 eyodwa, ngokombono wami noma ngokuya ngezidingo zami engasebenzi.
Kulungile !! Manje sekucace bha ... Ngakuqonda ukuthi i-Desktop Environments (DE) ne-Window Managers (WM) zingena kusigaba se-Shell ...
Ngicabanga ukuthi ukungena nokucaciswa kuphelele. Ngicabanga ukuthi bengikwazi okungaphezulu noma okuncane ukuthi kwakuyini iShell, yize kuliqiniso ukuthi kuza ukuvuselela imiqondo nokwazi futhi ungakhohlwa ukuthi ngizama ukuqhubeka nokuba yiShell (umugqa womyalo). Yisixhumi esibonakalayo esisodwa kepha sombhalo. Ngicabanga ngomphathi wedeskithophu njengesamba samathuluzi we-WM + Shell +. Ngokwengxenye kunelukuluku noma ngengozi ukufaka lokhu kufakwa ngoba bengizibuza ukuthi ngingalifaka kanjani i-Arch (ukufakwa okuncane), ngaphandle kokufaka iGnome Shell, ukufaka iCinnamon (engiqonda ukuthi enye iShell). Angazi noma ngingawenza ngisebenzisa amapharamitha athile nge-pacman (-ignore noma into enjalo). Futhi ngithanda ukufaka i-LightDM-Ubuntu esikhundleni se-GDM futhi uma kungenzeka ungafaki iNautilus ukuzama enye efana neNemo, Pantheon, njll. Okucishe kwenziwe yiCinnarch kepha ngiyazenzela. Kepha kungukuphawula okulula ngoba bengivele ngishilo ukuthi bengicabanga ngokungacabangi ukuthi HHAYI ukufaka iGnome Shell ukuze ngithole enye futhi ngaleyo ndlela ufake okubalulekile.
Ukubingelela nokubonga nge-athikili;).
Akunasidingo sokusungula izincazelo. "Igobolondo" elisemthethweni le-KDE SC 4 libizwa ngePlasma futhi alihlangene nakancane ne-GNOME Shell (ngokubonga). "Igobolondo" elisemthethweni le-GNOME 3 libizwa ngeGNOME Shell ngoba onjiniyela bayo bebefuna ngaleyo ndlela. Futhi ukubheka i-KDE njengendawo (hhayi njengomphakathi eyiyo) engamukelwa ezingxoxweni ezingahlelekile kepha kuyiphutha (i-Wikipedia ingasho ubukhulu) ngoba labo abathuthukisa i-KDE SC 4 abakakwamukeli lokhu kwenziwa lula isikhathi eside. Ku-GNOME banenye inqubomgomo, umphakathi kanye nemvelo zibizwa ngokufana.
Manje njengoba ngicabanga ngakho uqinisile, futhi futhi angivumelani nokuthi i-lxde iyigobolondo, imvelo yedeskithophu kuphela efana ne-XFCE nabanye, kepha njengoba ngishilo igobolondo elibi liyimpunyela yabanye akukho sikhalazo, okungenzeka Izikhalazo zePlasma (Ngaphandle kokuthi uyifake kukhompyutha enenqama engu-256).
Impela. Ngicabanga ukuthi kukhona okuthile okuthokozisayo kulokho okunikelayo: I-KDE (ukukhuluma ngokungahlelekile) akuyona iShell, kepha yi-Desktop Environment, kanti iPlasma iyiShell ye-KDE. Mhlawumbe nginephutha, kepha imiqondo kaShell ne-DE ayihlangene ngalutho nayo.
Nami angibabheki ngokufanayo. Kimi into eyodwa ideskithophu (isikhombimsebenzisi esibonakalayo esilandela isingathekiso sedeskithophu) enye into imvelo yedeskithophu (lapho kufakwa khona ideskithophu nezinye izinto). Lokhu kungadida kepha kungafakwa ngezibonelo. I-GNOME 3 imvelo yedeskithophu kanye ne-GNOME Shell, Unity, njll kungama-desktops (i-GUI noma amagobolondo wokuqhafaza).
Ngokuqondile, i-Desktop ilapho sinesithombe sangemuva, iphaneli, izithonjana zikadoti njalonjalo. Imvelo yedeskithophu wonke amathuluzi nezinto ezisetshenziswayo kuDeskithophu kanti uShell umhlobiso esiwufaka kudeskithophu noma kudeskithophu entsha 😀
Uma uqinisekile ukuthi uqinisile, mhlawumbe kufanele uthole i-Wiquipedia ephutheni layo ...
Ungumthombo obhekwa njengothembekile kodwa ongenaphutha futhi kulokhu, kubonakala sengathi akulungile, noma cha? ...
@ UJosé Miguel, iWikipedia ilawulwa yizidalwa ezingenamphefumulo abantu abazibiza ngabasebenza njengezincwadi. Amathoyizi abo awafanele ukuthintwa (ngaphandle kokuthi ufuna ukuba omunye wabo).
I-Wikipedia iyaziphikisa emakhasini ayo amaningi. Kumele ubone ukuthi babhala ini ngobumbano kulezi zixhumanisi:
Ngokusobala ubumbano indawo yedeskithophu eyakhelwe imvelo yedeskithophu ye-GNOME. Kufana ne-matrioska.
yingakho leyo ye- "KDE SC"
UJorge Manjarrez kusho
Hhayi-ke, ngenze lokhu okuthunyelwe ngokubhekisa kumazwana abonakale efaneleke kakhulu. Wonke umuntu uqinisile ekuqinisekiseni nasekuphawuleni kwakhe futhi njengoba i-KDE iyi-DE nePlasma igobolondo, ngicabanga ukuthi i-gnome ihlanganisa lezi zimo ezi-2 zibe yi-1 kuphela. Uma umbono muhle noma mubi, angazi, uma unekusasa, isikhathi sizotshela.
Ngikholwa ukuthi i-gnome kancane kancane inika ukwakheka kanye nempahla kule "entsha" ye-DE + Shell futhi izinguquko nokwenza ngcono kwenziwe ekubuyekezweni 6 kanti ukubuyekeza okuzayo 8 kufaka amanye amathuluzi avumela ukukhululeka okuncane (ikakhulukazi ama-GUIsers), ngoba Ngokugcina nokwenza ukulungisa kwi-CSS ungathola indawo ebukekayo nedeski lokusebenza elisebenzayo.
Phendula uJorge Manjarrez
Nginombuzo mayelana nobunye igobolondo le-gnome 3 elenziwe ku-Qt? Mayelana ne-KDE, ngiyakuqonda okushiwo yiWindóusico «Igobolondo elisemthethweni le-KDE SC 4 libizwa ngePlasma»
I-PS: bese ubamba igobolondo le-gnome !!!
[quote = piayet] [quote = piayet] Ngabe kukhona ongangitshela ukuthi yini umehluko phakathi kweGnome 3 neGnome Shell? [/ quote]
haha capo, ngiyabonga ngempendulo ...
Okwami ​​ukuphela kokuphawula ngamawindows hehehee xd
Ngifuna umuntu ozongisiza ngokuthi ungazifaka kanjani izinhlelo ezisebenza ngaphansi kwamawindi kuFEDORA 17
Ngizamile kusuka ku-TERMINAL kepha kuyangitshela ukuthi kukhona ifayili elifakiwe elidinga olunye uhlobo.
Okwamanje angisayikhumbuli kepha kuyinto efana ne-config nenguqulo 2.8.0.6 futhi leyo efakiwe ngu-2.8.0.8 Ngiye kuwebhu yaleli fayela noma kubashayeli futhi lapho kubonakala sengathi yilona olungibuza ku-terminal lapho linginika khona iphutha kepha lapho ngifuna ukuyifaka kungitshela ukuthi kufakwe inguqulo ebuyekeziwe.
Umqondo enginawo ukukhipha inguqulo yakamuva bese ngifaka inguqulo endala. ku-linux kuphela angazi ukuthi umyalo uzoba yini ukukhipha lokho.
Noma uma kukhona ezinye izinhlelo ngaphandle kwewayini nokwenza okuhle ukufaka. zama enye futhi mhlawumbe ugijime ...
Okunye futhi ukuthi ngifakwe isithunywa kodwa lezo ezifakiwe zixhuma i-hotmail messenger kuphela. Ngisho ukuthi nge-akhawunti yami ye-hotmail futhi i-yahoo ithumela iphutha.
Futhi ekugcineni, ngimtholaphi umdlali onomsindo omuhle njenge windows media player 11 no-version 12.
yini i-fedora 17 ayinalo lelo zwi elihle. yilowo msindo kasorrund
mfcollf77 kungani ungabuzi umbuzo esithangamini ongesona leso?
Angizisoli ezintsha, ngibe ngumsebenzisi we-GNU / Linux iminyaka futhi lezi zinto zisangidida 🙂
Kepha kungakuhle uma umbhali wokuthunyelwe enza ucwaningo oluncane futhi alungisa amaphutha. Mhlawumbe emcabangweni ojwayelekile wokuthi igobolondo lokuqhafaza elikwikhompyutha ingahle ilunge ngandlela thile, kepha hhayi ngokusetshenziswa kwegama elithi Shell ku-GNU / Linux.
U- @elav uphumelele impela emiqondweni yakhe. Ngokufanayo, kwi-Wikipedia (ngeSpanishi nangesiNgisi) kunemininingwane enhle kakhulu.
* Izindawo zeDeskithophu: I-KDE, i-GNOME, i-Xfce, i-LXDE, njll
* Umphathi Wewindi: KWin, Metacity, Mutter, Enlightenment, Xfwm, njll
* I-Graphical interface yomsebenzisi (Umsebenzisi Iinterface): Ku-KDE zibabiza nge-Workspace futhi zintathu: iPlasma Desktop (Desktops), iPlasma Netbook nePlasma Active (amadivayisi eselula). Lesi sakamuva asiyona indawo yokusebenzela ngokuphelele kepha isikhombimsebenzisi esibonakalayo sokuqhafaza.
E-GENOME sineGNOME Shell okuyisikhulu sephrojekthi kanye ne-Unity for Ubuntu.
Ukusuka kumazwana engiwafundile ngenhla, abonakala eqinisile. I-Wikipedia ngeSpanishi ibonakala ingethembeki kangako kunaleyo yesiNgisi.
Into ethembeke kakhulu ukubheka amakhasi asemthethweni wephrojekthi ngayinye. Ngale ndlela ugwema ukhokho bengqondo.
Ukwenza okulungile ngokwengeziwe, noma ngubani wethu angahlela futhi alungise okufakiwe kwe-Wikipedia. Kepha nginombono wokuthi ukukwenza lokho kungcono ukufanelekela kahle endabeni onesiqiniseko esikhulu salokho okubhalwayo. Futhi ngicabanga ukuthi yilokho okwenzeka ngeWikipedia ngeSpanishi, ngenhloso yokusebenzisana noma ngubani engeza okufakiwe noma ngabe bengakacwaningi ngokwanele ngale ndaba.
Ngicela umbhali webhulogi futhi ukuthi acacise imiqondo, ngoba ngicabanga nje ukuthi kusuka kokufakwe kanjena bangasho ukuthi i-KDE iyiShell nje, kunginikeza amaqhuqhuva osi
Incazelo enhle, ngiyabonga.
UManuel Trujillo kusho
Mhlawumbe nginephutha, kepha ngicabanga ukuthi lokhu okukhombisayo akulona iqiniso ngokuphelele, ngoba uma sisebenzisa incazelo yakho, iGnome-Shell * if * iyigobolondo, njenge-KWin, kodwa akunakwenzeka ukuthi iGnome kanye / noma i-KDE (Angiphawuli kwamanye ama-desktops ngoba angibazi njengalaba ababili).
Ngakolunye uhlangothi, ingahle ilungiswe ngokwengeziwe kuncazelo yakho kunanoma iyiphi iMenenja yeWindi (AfterStep, Enlightenment, FluxBox, WindowMaker, Fvwm, njll). Kepha noma kunjalo bebengeke babe njalo, ngoba ukuxhumana nohlelo uhlelo lwe-X kuyabandakanyeka, futhi iMenenja yeWindow kungaba kuphela igobolondo lokuxhumana nohlelo lwe-X lokuqhafaza (into ebuye, ngandlela thile, ibe kusebenza kwamanye ama-desktops).
Kepha njengoba ngishilo, mhlawumbe yimi engingafanele ...
Phendula uManuel Trujillo
briseida iras lopez jimenez kusho
Angilithandi igobolondo 😛
Phendula ku-briseida iras lopez jimenez
Ubuntu / Kubuntu kanye nokuphuma kuye kwehla usayizi we-CD
Kusemthethweni, Ubuntu noKubuntu ngeke besaba khona kumaCD